Isiphephelo Sasemakhaya kusuka ku-COVID eDolobheni (ihora eli-1 ukusuka e-NYC) - I-Airbnb
Isiphephelo Sasemakhaya kusuka ku-COVID eDolobheni (ihora eli-1 ukusuka e-NYC)
Jefferson, New Jersey, i-United States
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Kelsey
Jabulela iLake Hopatcong kuleli khaya elincane elihle elinegumbi lokulala elizimele eliqashiwe. Igumbi lokugezela le-Master elihlanganyelwe elinokhiye emnyango nobhavu wokugeza we-jacuzzi kanye negumbi elondolo eliseduze negumbi lokulala elizimele. Igumbi lokulala linoMATTRESS OMLOVU OMLOVU! Ubusuku obuhle kakhulu ongake ube nabo! Indlu iphethwe abashadile abasebenzela ekhaya. Indlu inobungani bezingane kakhulu inegumbi lokudlala/lokufunda elihlomele ngokuphelele. Sinezinja ezincane ezi-2 ezinobungane kakhulu. Inothi Elikhethekile: UBill Murray uhlala mahhala!
Indlu yethu ethokomele ikuvulekele ukuthi uyisebenzise. Sihlala kuyona futhi kodwa uzokwazi ukungena kuwo wonke amagumbi amakhulu. I-Master Bath, igumbi elondolo, igumbi lokuhlala, igumbi lezivakashi nekhishi kuyahlanganyelwa futhi vele igumbi lakho liyimfihlo ngokuphelele futhi igumbi lokugezela elikhulu linokhiye emnyango. Kukhona negumbi lokugeza lesibili eligcwele phansi futhi.
Ihhovisi, ikamelo lokulala elikhulu kanye namakamelo ezingane avunyelwe izivakashi. Uma kungenjalo isikhala ngesakho ongasisebenzisa!
5.0 · 37 okushiwo abanye
Ukuhamba ngemoto imizuzu emi-3 ukusuka eChibini. Kunezindawo zokudlela eziningi ezinhle namabha ezemidlalo ngaphakathi kwebanga lokuhamba noma idrayivu emfushane. Ngaphambili kwechibi kunenkundla yegalofu encane futhi!
Tim, Kelsey And Benjamin
I-COVID UPDATE: Njengamanje sisendlini futhi sisebenza sisekhaya nengane yethu eneminyaka emi-2. Indlu izovulelwa ukuthi nihlanganyele ngaphandle kwezindawo ezithile: igumbi lokulala elikhulu, igumbi lezingane kanye neHhovisi eliseduze nekhishi.
Singaba nobudlelwane noma sizihlukanise njengoba izivakashi zethu zifisa. Sivame ukuzigcina sodwa kodwa siyakujabulela ukuhlanganyela uma izivakashi zingathanda ukwazi ngendawo noma ukusazi kangcono.
I-COVID UPDATE: Njengamanje sisendlini futhi sisebenza sisekhaya nengane yethu eneminyaka emi-2. Indlu izovulelwa ukuthi nihlanganyele ngaphandle kwezindawo ezithile: igumbi lokula…
Hlola ezinye izinketho ezise- Jefferson namaphethelo